मानिस अझैसम्म चेतनशील छैनन् - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
मानिस अझैसम्म चेतनशील छैनन्
विश्वकर्माले उज्यालो टाइम्समा मानवअधिकार र दलित अधिकारका बिषयमा कमल चलाउछन्।
भनिन्छ नि, दक्षिण एसिया बस्ने मान्छेहरु जातिय छुवाछूत गर्छन्, विभेद गर्छन्। तर यतिबेला विश्वको दृश्यलाई हेर्ने हो भने – समग्र संसार छुवाछूतको कडाईले पालना गरेको देखिन्छ। नोवेल कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को संक्रमण भौतिक दुरी एकले अर्कालाई नछुने र सामुहिक सामाजिक दुरीको दायरा बढाउन पर्ने – सरकारी नियम। हेर्नुहोस् त हामी सामाजिक दुरीको बहिष्कार गर्ने आज सामाजिक दुरी बढाउन भनिरहेका छौं। सरकारले बनाएको संवैधानिक धारा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन सार्वजनिक ठाउँमा छुवाछूत नगर्न पाउने र मिलेरै बस्नु भन्ने चुपचाप? कस्तो विडम्बना अहिले सरकारले सामाजिक दुरी राख्नुपर्ने संवैधानिक भनेका छन्।
अझैसम्म मान्छे चेतनशील छैनन्। हामी हेरिरहेका छौं – विश्वको ठूलो राष्ट्रका मान्छे कोरोना पीडितलाई छन् – डराएका छन्। हाम्रा यतातिरका मुर्ख हुनुसक्छन् धर्मको नाममा नछुने, रोगको निहुँमा नछुने तर हामीले हेरिरहेका छौं। युरोप, बेलायत, चीन, अमेरिका जस्ता शिक्षित विज्ञानको कुरा गर्ने कोरोना पिडितलाई छुन मानेका छैनन्। के होला यस्तो मानसिकता? के कोरोना यतिको भयावह स्तिथिमा होला? कतिपय ठुला अस्पतालहरु बन्द भइरहेका छन्।
मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गुम्बा त पहिलो देखि भगवान सहित बन्द। जुन ठाउँमा उपचार हुनुसक्छ त्योपनि संक्रमणको निहुँमा बन्द गरे भन्दा रोगीले कुन ठाउँ जाने होला? रोग बाँच्न हरेक कुरो गरियो थाल बजायो, ताली ठटायो, दियो जलायो अब के गर्नुछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले भनेको हरेक कुरालाई देशव्यापी समर्थन मिल्यो आगामी दिनमा पनि मिल्न सक्छ। प्रवासी नेपाली समुदायले नेपाल सरकार र भारत सरकारको कोरोना सम्बंधित सर्कुलर हेर्नू र मान्नुपर्छ। यो देशहितमा हुनेछ। अलपत्र परेको छुँ भनेर पैदल नेपालतिर नहिड्नु होला। किनभने बोर्डर सिल छ। तपाईं सिमानामा अलपत्र पर्नु सक्नुहुन्छ!
भारत सरकारले एक राज्यबाट अर्को राज्य कोरोना फैलायो भनेर भारतीय संबिधान अनुसार कडा कानुनी कार्यवाही गर्न सक्छन् – सचेत हुनुहोस्। यदि, तपाईं कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ भने जानीनजानी रोग नेपाल भित्र्याउन नेपाल सरकारको दोषी हुनसक्छौं। आफ्नो गाउँघर परिवारमा रोग सर्न सक्छ। तसर्थ तपाईंहरु जहाँ बस्नु भएका हुनुहुन्छ त्यही बस्नुप¥यो – सरकारको अघिल्लो सर्कुलर न आएसम्म। सरकारी राहत वा कसै संघ–संस्थाले दिएको खाने कुरा मिलाएर खानुपर्ने भो पेट भर्नु नभएर बाँच्न खाउँ। आफ्नो परिवार र बालबालिकाको विशेष ध्यान बाटोमा पुगाउनु होस्। तपाईं राजा बाटोमा अलपत्र हुनुहुन्छ। हामी घरभित्र सजाय छ। सबैलाई एक्कासी एकैजस्तो आए रहेको छ।
मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च कतैबाट भगवान आएनन्। हामीले प्रत्यक समय ईश्वरमाथि श्रद्धा विश्वास ग¥याउँ। मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चमा भरपुर चन्दा दियौं। तिनि चन्दाको रकमले मन्दिरका पुजारी, मस्जिदका मौलवी, गुम्बाका लामा भिक्षु, चर्चका पास्टर पेट भर्नु र आफुलाई मोटाउनु गरेका छन्। करोडोंको रकम शीर्डी, बालाजी, वैष्णोंदेवी, पशुपति, मनकामना, सबरीमला, १२ ज्योतिर्लिङ्ग मन्दिर, ५२ शक्तिपीठ मन्दिरको तहखानामा कैद होला! यस्तो रकम सरकारले कोरोना जस्तो आपदामा लोककल्याण हेतु सील गर्नु पर्छ। भगवानलाई कागजको नोट, हिरा मोती सुनको दिवार रत्नजडित मुकुट आभुषण चाहिँदैन। आखिर ईश्वर हुन् सबैलाई दिने प्रभुलाई हामी के दिनुसक्छौं। घट–घट में राम! कण कण में भगवान छन् – भन्ने हरुले लुट मच्चाउने गरेको छ। राष्ट्रको कालो सम्पती भरतारको निहुँमा कैद छ। कोरोनासँग लड्न सरकारी खजानामा ल्याउनुहोस्।